ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ခြင်းကြောင့် မန်စီးတီးကို နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးခဲ့ရဟု အာစင်ဝင်းဂါးဝန်?? - Yangon Media Group
ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ခြင်းကြောင့် မန်စီးတီးကို နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးခဲ့ရဟု အာစင်ဝင်းဂါးဝန်??
မန်စီးတီးအသင်းကို အိမ်ကွင်းတွင် ထပ်မံရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် အာဆင်နယ်နည်းပြဝင်းဂါးက မိမိတို့အသင်းသည် လိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် မန်စီးတီးအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးကတည်းက ယုံကြည်မှုများ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ဝန်ခံသွားခဲ့သည်။ အာဆင်နယ်အသင်းသည် လိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် မန်စီး တီးအသင်းကို သုံးဂိုးပြတ်အရေး နိမ့်ခဲ့ပြီး ကြာသပတေးညက ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့သည့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွင်လည်း ပွဲချိန်ပထမပိုင်း ကတည်းကသုံးဂိုးပေးခဲ့ရပြီး အ ရေးနိမ့်ခဲ့ရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ပထမပိုင်းအတွင်း သုံးဂိုးပေးရခြင်းသည် အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ပရီးမီးယား လိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်တွင် ပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် နေရာနှင့် ၁ဝ မှတ်အထိကွာဟသွားခဲ့ခြင်းကြောင့် နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါးအတွက် ဖိအားပိုများလာခဲ့သည်။ အာဆင်နယ်အသင်းသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်းကစားခဲ့သည့် ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ်တွင် ရှုံးပွဲခုနစ်ပွဲ အထိရှိနေခဲ့ပြီး မန်စီးတီးကို ဒုတိယအကြိမ်ရှုံးနိမ့်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အာစင်ဝင်းဂါးက ” ဒီရှုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အများကြီးမပြောချင်ပါဘူး၊ ဒီပွဲက ကွာလတီကောင်း ပြီး ယုံကြည်မှုပြည့်ဝနေတဲ့ အသင်းနဲ့ ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသင်းနှစ်သင်းရင်ဆိုင်ကစား ခဲ့ကြတာပါ။ ပွဲချိန်ပထမပိုင်းမှာကတည်းက ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ကြရတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုပျောက် ဆုံးနေမှုကိုသူတို့က အခွင့်ကောင်း ယူနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန် တော်ပြောနိုင်တာက အာဆင်နယ်အသင်းဟာ နည်းစနစ်ပိုင်းနဲ့ ကြိုး စားအားထုတ်မှုအပိုင်းမှာ အကောင်း ဆုံးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်”ဟု ပြောသွားခဲ့သည်။
အာဆင်နယ်အသင်းသည် ယခုရာသီတွင် ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲ တစ်ရပ်တည်း၌သာ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပြီး နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါး၏ ရာထူးမှာလည်း လာမည့်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်မရပါက ဆုံးရှုံးရဖွယ်ရှိနေသည်။ အာဆင်နယ်အသင်းသည် ဝင်းဂါး၏နေရာတွင် အစားထိုးရန် အတွက် ဂျာမနီနည်းပြ ဂျိုအာချင်လို၊ ဆဲလ်တစ်နည်းပြဘရန်ဒန် ရော်ဂျာတို့ကို ပစ်မှတ်ထားနေပြီး ယခုနောက်ဆုံးတွင် အသက် ၃ဝ အရွယ်သာရှိသေးသည့် ဟော့ဖန်ဟိန်းနည်းပြ ဂျူလီယန်နာဂျယ်မန်းကိုပါ ပစ်မှတ်ထားနေသည်ဟု ဗြိတိန်သတင်းများက ဖော်ပြ လျက်ရှိသည်။
သုံးလခန့် အနားယူရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို နေမာ လွဲချော်ရဖွယ်ရှိနေ
ကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော် အကုန်ကျခံ တည်ဆောက်မည့် ညောင်နှစ်ပင်စက်မှုဇုန်သစ်ကို ကိုရီးယားက စတင်?
သစ် ရှားပါးလာမှုကြောင့် မြိတ်ကျွန်းစုရှိ လှေအမျိုးမျိုး ပြုပြင် တည်ဆောက်ပေးနေသော လွန်းကျင??
ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အပြီးပိုင် ပိတ်သိမ်းပေးရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိ?
မုံရွာတွင် သက်တမ်းလွန် ဆေးဝါးနှင့် စားသုံးရန် မသင့်သော အစားအသောက် ပစ္စည်းအမျိုးအစား ၉၀ဝ ကျေ?